मंगलाको लोकप्रिय काम ! दीर्घरोगीलाई घरआगनमै औषधी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक मंगलाको लोकप्रिय काम ! दीर्घरोगीलाई घरआगनमै औषधी
मंगलाको लोकप्रिय काम ! दीर्घरोगीलाई घरआगनमै औषधी
२०७७, ५ बैशाख शुक्रबार २२:०६
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–३, भाँक्रीपानी निवासी धन बहादुर विकलाई सास फेर्न समस्या भएपछि सुत्ने कोठामै अक्सिजनको सिलिन्डर राखिएको छ । दम रोगी विकलाई शरीरमा अक्सिजन सहज बनाउन आवश्यक पर्ने अक्सिजनको सिलिन्डर खाली भएपछि छटपटी भयो।
कोरोना भाइरको जोखिमलाई रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बजारमा सिलिन्डको अभाव भएपछि तत्कालै गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकालाई खवर गरे । घरमा राखिएको अक्सिजन सिलिण्डर सकिएको जानकारी अध्यक्ष रोकाले पाएलगत्तै आवश्यक पर्ने सिलिन्डर नै लिएर घरमै पुगेपछि विक उत्साहित भएका छन् । ‘लकडाउनले नियमित ल्याउने ठाउँमा पनि पाइएन्,‘श्वास फेर्न गाह्रो भएको अवस्थामा घरमै ल्याइदिनुभयो’ बृद्ध विकले भने । उनले सिलिन्डर नै नपाउने चिन्ताले सताइरहेको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाको पहलमा सवारीसाधनको प्रयोग गरी घरमै अक्सिजन आइपुगेपछि भाबुक बनेको बताए । उनले अध्यक्ष रोकालाई आभार प्रकट समेत गरे । लकडाउनमा गाउँपालिका भित्र नियमित औषधी सेवन गर्नेहरुलाई घरदैलोमै औषधी पुर्याउन गाउँपालिकाले विकको समस्या जटिल देखेर सवारीसाधनकै प्रयोग गरी घरसम्म पुर्याएको अध्यक्ष रोकाले बताए । ‘अक्सिजनको अभावमा ज्यान जानसक्ने जोखिमले हतारहतारमा पुगे,‘थला पर्नुभएका विकको घरमै सिलिन्डर पुगेपछि उत्साहित हुनुभयो’ उनले भने।
विकलाई नियमित ढुवानीको समस्या हुने देखेर दुईवटा पहिला र थप ६ वटा सिलिन्डरको ब्यवस्था गरिएको अध्यक्ष रोकाको भनाई छ । लकडाउन अवधिभर ५ वटै वडामा रहेका दिर्घरोगीको पहिचान गरी औषधी उपलब्ध गराउन स्वंयमसेवक समेत परिचालन गरिएको छ ।
नेपाल यूथ काउन्सिलका बरंजा प्रतिनिधि हरि कँडेलले लाल बहादुर बुढाथोकी, विष्णु श्रीष, रमा खड्का, धन बहादुर विक र खर बहादुर रोकालाई घरदैलोमै औषधी पुर्याइदिएपछि खुसी हुदै धन्यवाद दिएको बताए ।
वडाभित्रका जनप्रतिनिधिले विरामीको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार औषधी उपलब्ध गराउने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए ।
‘जटिल अवस्थाका बिरामीलाई भेट्ने योजना नै बनाउनुभएको छ,‘बिरामीलाई औषधीको अभावमा कुनै समस्या हुदैन’ गौतमले भने । उनले विरामीको आवश्यकता अनुसारको औषधीको प्रबन्ध मिलाउन अध्यक्ष रोकाको निर्देशन अनुसार नै वडास्तरमा परिचालन गरिएको बताए ।
लकडाउनमा ‘मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीले हरेक महिना किन्ने गरेको औषधीको मौज्दात सकिन थालेपछि गाउँपालिकाले आवश्यक औषधिको विवरण संकलन गरी विरामीको पहिचान समेत गरिसकेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि समान्यदेखि चिकित्सकको नियमित निगरानी चाहिने बिरामीलाई समेत स्वयंमसेवकले समेत चिकित्सकलाई फोन गरी आवश्यक जानकारी समेत लिने गरेका छन् ।
Previous articleघोरेपानीमा भेटिएका दुई चिनियाँ पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो
Next articleलक्षण नदेखिने संक्रमितले जोखिम